Ndị ụlọ ọrụ na-atụgharị na Netwọk mmekọrịta mmekọrịta Martech Zone
Ndị ụlọ ọrụ na-atụgharị na Netwọk mmekọrịta ọha
Wednesday, June 18, 2008 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Enwere ọtụtụ ozi gbasara netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta na weebụ, mana agagharị agala iji weta ụfọdụ uru nke netwọkụ mmekọrịta na Intranet. M mere nnyocha ụfọdụ na isiokwu maka ọkara ụbọchị ịkparịta ụka n'sessionntanet nnọkọ m kwuru na ya na IABC ụnyaahụ na nchoputa ahụ bara uru iji nlezianya lee anya. Ekwesiri m igwu ala iji chọta ozi na ihuenyo, mana enwere ole na ole akụrụngwa dị ebe ahụ na-eche Intranet.
Intranet gbara ọkụ ma nwụọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ tupu teknụzụ Web 2.0. Ọ bụ ihe nwute, n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbapụta na otu echiche ịghara ịlaghachi na ya ozugbo ọ daa. Ihe izizi mbu abughi ihe obula ma obu ndi na-ewu ulo oru webusaiti nke ngalaba obula kwesiri iji biputere ozi na ozi, n’enweghi ego ma obu akpaka Microsoft kwalitere Sharepoint, mana mbọ achọrọ iji rụọ ọrụ na ichekwa ọdịnaya ahụ ka gafere ọkwa nka nke onye ọrụ ọ bụla.
Na ọbịbịa nke Ngwa Google, Social Networks, Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na ịkparịta ụka n'networkntanet, oge eruola ka Intranet laghachi azụ.
Okwu Azụmaahịa maka Netwọk mmekọrịta ọha
Nyochaa na Drive Corporate Strategies - hụ na ndị ọrụ, otu na ọrụ na-kwekọrọ na ụlọ ọrụ ọhụụ.
Ndị isi ụlọ ọrụ Flatten - na-enye ụzọ kwụ ọtọ sitere n'aka onye isi ala rue onye ọrụ kachasị dị ala yana nke ọzọ. Nke a na - eduga na nkwukọrịta ka mma, nghọta, ntụkwasị obi na ike nke ndị ọrụ.
Na-akwalite ịkparịta ụka n'Internntanet - nye ndi oru ohere ichota ndi oru ozo ndi n’acho mmekorita ha n’ime ma n’ime ulo oru - egwuru-egwu, Uka-uka, ihe omume mmasi, wdg.
Echiche - Ọgbọ Echiche - ngwaọrụ iji mepụta echiche bụ ihe a na-ahụkarị na ntanetị intaneti ndị isi ụlọ ọrụ. Ngwurugwu yiri Digg maka akwalite echiche maka ezigbo ego na ihe nrite ndị ọzọ.
Akụkọ na Ozi - Kesaa ụlọ ọrụ na akụkọ ndị ọrụ na mbipụta akụkọ.
Resources - nye ọba akwụkwọ, nkuzi, ihe ahia, akwụkwọ ngwaahịa, enyemaka, atụmatụ, ebumnuche, mmefu ego, wdg.
Ihe Ọmụma Ihe na Njikọ Aka - nye wikis na akụrụngwa iji mee ka ọsọ ọsọ nke ihe achọrọ, akwụkwọ, wdg.
Ọrụ dabeere na Workforce - nye uzo maka ndi oru iji hazie na mpụga nke ọnọdụ anụ ahụ, ọkwa nka, ngalaba, wdg. Ikike ịchọọ ma chọta ndị ọrụ bụ isi wepụ usoro iwu site na usoro ahụ, na-enye ndị otu ọfụma aka ịhazi ma mezuo ngwa ngwa.
Na nyochaa ụgbụ ahụ, enwere ọtụtụ 'ụtọ' nke otu ụlọ ọrụ si agbasa netwọkụ site na intranet ha - yana njirimara ụlọ ọrụ na ngwa ha na-agwa. Biko kpọọrọ m na nchọta m ebe a - ebe ọ bụ na anaghị m enwe ike ị nweta Google, Microsoft, Yahoo na IBM, a na m arụ ọrụ na ederede na nseta ihuenyo nwere ike ịbụ izu… ma ọ bụ afọ!
Moma Google abughi igwe nchoputa di mfe, Moma na-enyekwa ohere ka edenye aha ndi mmadu ma mata ya na ihe dijitalụ. Site na ụfọdụ saịtị m gụrụ, Google nwere usoro ịtụle usoro nyocha koodu weebụ akpọrọ Mondrian.
Yahoo! Azụ na-apụta ìhè gosipụtara nkwupụta ozi ha yana ịhazi ihe na-akwado nkwupụta ahụ maka ndị ọrụ ha ịlele. Enwere m ihe ijuanya na etu esi egbu egbu na nke a - na, na-ekpe ikpe site na nsogbu Yahoo na ịnwe usoro, amaghị m na etu a si akwụ ụgwọ.
N’otu nzukọ buru ibu dịka IBM, nke nwere ọtụtụ narị puku ndị ọrụ, ọ nwere ike bụrụ nnukwu echiche itinye saịtị ebe ndị folks nwere ike ịchọta ibe ha! Akwuru anu yiri ka ọ bụ nnukwu ihe enyemaka maka ndị ọrụ iji chọpụta ma chọta ndị ọrụ ndị ọzọ.
Saịtị Microsoft pụtara n'ezie na ọ na-etinye uche na akụ maka ndị ọrụ ya na ngwaahịa na ọrụ ha. N'oge na-adịbeghị anya, Microsoft amalitela Townsquare - ngwa mmekọrịta maka ịkparịta ụka n'andntanet na imekọ ihe ọnụ.
Ikwesighi ịbụ nnukwu ụlọ ọrụ iji tinye ngwaọrụ ngwaọrụ na usoro ọrụ gị. N’ụlọ ọrụ m, anyị akwagala kpamkpam Ngwa Google ma tinyewo ya Salesforce.
Tags: kpaliri atụmatụ afọ ọhụrụlaura egburu
Jun 18, 2008 na 11: 40 PM
Hey Doug, akwụkwọ ozi - na ụlọ ọrụ m anyị kwagara Google Apps. Ọ dị mma. Ya mere, maka ebumnuche nke nkata n'ime ya na ihe ndị yiri ya. Calender na docs dịkwa ukwuu maka ebumnuche dị n'ime. Achọpụtara m obere nsogbu ọ bụla. N'ịbụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi, anyị na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ ma achọpụtara m na achọghị m ụfọdụ ndị ọrụ m na-enweta ozi na ọrụ m niile. Anyị gbanwere Deskaway achọpụtara m na oge niile ọ na-adị m ka ọ na-achịkwa m. Na mgbakwunye enwere enwere ụlọ ọrụ n'ime ọrụ ọ bụla ka m nwee ike ịkekọrịta blọọgụ na faịlụ wdg - na-edebe ihe agbakọtara n'ime ọrụ - na nyocha bụ ego agbakwunyere. ihe na-efu na ngwa ahụ bụ nkata mana mgbe ahụ Google Apps karịa na-eme maka nke ahụ. Ọ bụghị naanị ngwá ọrụ - theres Zoho na Wrike na Basecamp wdg.
HOVR THE FB THATR THAT NA 'B INR VIDEO NT VIDEOKWU ND VIDEO D VIDEO N'IME VIDEO
Sep 6, 2008 na 11: 37 AM
Daalụ Aditya, abụ m nnukwu onye Seesmic!
Sep 5, 2008 na 12:32 PM
ọmarịcha post. Agbaghara otu toro toro nke ọma, nke ndị ọrụ abụọ wuru site na iji nyiwe na-emepe emepe na mmepe (drupal) ma bụrụkwa ezigbo ihe atụ nke usoro mgbado elu. Blueshirtnation.com, Ntanetị mmekọrịta kacha mma na Buy Buy. Gary Koelling na Steve Bendt bụ ndị okike. Linksfọdụ njikọ….
Isiokwu na Blueshirtnation
Ha kwukwara na akwụkwọ Charlene Li, “Groundswell”.
Sep 6, 2008 na 11: 28 AM
Daalụ! Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị mgbe ndị ọrụ were ya were bido netwọkụ mmekọrịta. Aga m elele ya.